Ukungabikho kolwazi kubeka iNazca engozini | Iindaba Zokuhamba
Maria | | Izaziso, EPeru
EPeru, phakathi kweedolophu zaseNazca nasePalpa, yenye yezona mfihlakalo zaziwayo zakudala ezikhoyo. Kule ntlango kukho iseti ye-geoglyphs enkulu ebonakalayo kuphela kubude obuthile, obenza izilwanyana, amanani abantu kunye nejiyometri. Zenziwe yinkcubeko yeNazca phakathi ko-200 BC ukuya ku-600 AD kwaye okoko i-archaeologists yaqala ukuzifunda ngo-XNUMX, uninzi lweembono malunga nemvelaphi nentsingiselo yazo ziye zavela, nangona zihlala ziyimfihlakalo.
Imigca yeNazca bubutyebi besizwe ePeru kwaye bayigcina ngenzondelelo. Nangona kunjalo, iNazca ayikhuselekanga kubo bonke ubungozi obuyisongelayo. Naluphi na unyawo kuloo ndawo, ngenxa yemathiriyeli kunye nemo yezulu, ihlala iphawulwe kumawaka eminyaka kwaye nawuphi na umonakalo wokwenyani ovelisiweyo awunakulungiswa.
Ngelishwa, ukunqongophala kokuqonda malunga nobuntununtunu bendawo kule minyaka idlulileyo kukhokelele kuthotho lwezenzo ezonakalise kakhulu uNazca.
1 Umonakalo oveliswe kwiNazca
2 Iingcinga malunga neNazca, ivela phi imvelaphi yayo?
3 Zimele ntoni iiNazca Lines?
Umonakalo oveliswe kwiNazca
Ezona zintsha nezona zonakalisayo zazo zenzeka ngoJanuwari ophelileyo, xa umqhubi ovela kwinkampani yezothutho angena kwiNazca Pampas ngaphandle kweempawu ezazilumkisa ngenye indlela kwaye zabangela umonakalo omkhulu. kwindawo yokumbiwa kwezinto zakudala kwindawo emalunga neemitha ezili-100. Ngenxa yoko, umkhondo onzulu ushiyekile emhlabeni ochaphazele abathathu kumawaka eminyaka ubudala abalinganiswa abatsalwe esantini.
Kuyabonakala ukuba le ndoda ibingayazi imeko yommandla wommandla kwaye yangena kwiNazca Pampas kuba inqwelo mafutha yayo yayinengxaki yevili. Nangona kunjalo, iSebe lezeNkcubeko lasePeruvia laxela ukuba liza kumgxeka ngokwasemthethweni umqhubi kwingxelo.
Kodwa i-Nazca Lines yayisele yonakele ngaphambili. Ngo-2014, ngexesha leNkomfa yemozulu ye-UN eyayibanjelwe eLima, amatshantliziyo avela kumbutho iGreenpeace angena kule ndawo, kwindawo apho i-hummingbird geoglyph ikhoyo, babeka oonobumba abakhulu ngomyalezo “Lixesha lokwenza utshintsho! Ikamva liyahlaziywa. Uxolo oluluhlaza. " ibonakala kuphela esibhakabhakeni. Emva kwaloo ngxwaba-ngxwaba, iGreenpeace izamile ukucela uxolo ngomonakalo owenzeke kwindawo leyo ebesele ingenakulungiswa.
Kunyaka kamva, ngoSeptemba 2015, isifundo safikelela kule ndawo kwaye sabhala igama lakhe kwenye yeegeoglyphs. Indoda yagcinwa ngoonogada ababephethe ukukhusela uNazca kwaye yanikezelwa kutshutshiso.
Iingcinga malunga neNazca, ivela phi imvelaphi yayo?
Ekuqaleni, abembi bezinto zakudala babecinga ukuba imigca yeNazca yayizindlela ezilula, kodwa ekuhambeni kwexesha ezinye iingcinga zafumana amandla ezazibamba ukuba "iindawo zonqulo" zenzelwe ukukholisa uthixo weendawo eziphakamileyo.
Namhlanje siyazi ukuba abemi baseNazca benze iigeoglyphs ngokususa amatye ngaphezulu komhlaba ukuze kubonakale ilitye lentlabathi elimhlophe ngaphantsi. Ukongeza, enkosi kubaphandi abaliqela abavela kwiYunivesithi yaseYamagata eJapan, siyazi ukuba zine iindidi ezahlukeneyo zamanani athanda ukudibana kwiindlela ezahlukeneyo kwindawo enye: isixeko sangaphambi kweInca saseCahuachi. Namhlanje yipiramidi enye kuphela esele imile, kodwa ngexesha layo lokuhamba yayiliziko lokuqala lokundwendwela kunye nenkunzi yenkcubeko yeNazca.
Ngokwababhali bezinto zakudala baseJapan, amanani eNazca akhiwe ubuncinci ngamasiko amabini ahlukeneyo aneendlela ezahlukeneyo kunye neesimboli, ezinokubonwa kwiigeoglyphs ezilanda umendo ukusuka kwindawo yabo yemvelaphi ukuya kwisixeko saseCahuachi.
Baye bafumanisa ukuba imizobo itshintshe ngokukodwa kwingingqi ekufutshane ne-Nazca Valley kunye nendlela eya apho isiya eCahuachi. Kuloo ndawo kukho isitayile esahlukileyo semifanekiso, ebonakaliswa ngaphezulu kwayo yonke ngokubonisa izidalwa ezingaphezu kwendalo kunye neentloko ngokungathi ziimbasa. Iqela lesithathu le-geoglyphs mhlawumbi elenziwe ngala maqela mabini lifumaneka kwithafa laseNazca, isithuba esiphakathi kweenkcubeko zombini.
Ngokwababhali bezinto zakudala baseJapan, ukusetyenziswa kwamanani eNazca kutshintshile ngokuhamba kwexesha. Ekuqaleni zazidalelwe izizathu zesiko, kodwa kamva zabekwa ecaleni kwendlela eya eCahuachi. Ngokuchasene noko abanye bakucingayo, kuyacaca ukuba la manani awazange asetyenziselwe ukumakisha indlela yohambo, kuba bekufanele ukuba sele iphawulwe kakuhle, kodwa ikukuphilisa izimvo, ikwanika nengqondo yesiko.
Nangona kunjalo, abantu abaninzi bazamile ukunika impendulo kwiintsingiselo zeNazca kwaye kukho iingcinga ezininzi malunga nemvelaphi yazo. Ingcali yezibalo uMaría Reiche waphembelela uPaul Kosok ngokufaka ingcinga yokuba le mizobo inentsingiselo yeenkwenkwezi. Abembi bezinto zakudala uReindel no-Isla bemba ngaphezulu kweendawo ezingama-650 kwaye bakwazile ukulandela imbali yenkcubeko eyenze le mizobo. Ukuhanjiswa kwamanzi kwakubaluleke kakhulu kwingingqi kuba iyintlango. Imizobo yenze imeko yesiko elinenjongo yokuba yayikukukhuthaza ukubongozwa koothixo bamanzi. Abembi bezinto zakudala bafumanise imitya kunye nezibonda abathi aba bantu balanda kuzo imizobo.
Zimele ntoni iiNazca Lines?
Imizobo yeNazca yejiyometri kunye neyokomfuziselo. Ngaphakathi kwiqela lokomfuziselo sifumana izilwanyana: iintaka, iinkawu, izigcawu, inja, igwana, icikilishe nenyoka.
Phantse yonke imizobo yenziwe kumhlaba othe tyaba kwaye bambalwa kuphela kumathambeka enduli. Phantse onke amanani abekwe kuzo amele amanani abantu. Abanye bathweswe ngezithsaba zemigca emithathu okanye emine ethe nkqo mhlawumbi emele iintsiba zesigqubuthelo sentloko (ezinye izidumbu zasePeru zanxiba izithsaba zegolide neentsiba).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » EPeru » Ukungabikho kolwazi kubeka uNazca emngciphekweni
Uqeqesho lweZorrilla, indlela eyahlukileyo yokufumana iValladolid
Iindawo ezibalulekileyo zokundwendwela e-Itali